We Fight We Win. -- " More than Media ": အကြမ်းဖက်မှုကို နိင်ငံရေးပါတီများ အသံတိတ် ထောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်မှုကို နိင်ငံရေးပါတီများ အသံတိတ် ထောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ၊လူဘောင်သစ် ပါတီ နှင့်မည်သည့်နိင်ငံရေးပါတီကမှာ မူစလင် ဘာသာဝင် များအား အကြမ်းဖက်မှု တို က်ခိုက်မှုကို ကန့် ကွက်သည့် ကြေညာချက်များ
နယ်စပ်ရှိ လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ စည်းများ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များမှ လည်း အကြမ်းဖက်မှုကြီးကို
စစ်အုပ်စုရဲ့မတရား အကြမ်းဖက်မှုကို ကိုကျော်သူ ( နာရေး အသင်း) မင်းကိုနိင်၊ ကိုမိုးသီးဇွန် နှင့် ဗကသ အဖွဲ့ ချုပ် တို့ သာဆန်ကျင် ပြောဆိုတာတွေ့ ရပါတယ်။
မင်းကိုနိင်၊ ကိုမိုးသီးဇွန် နှင့် ဗကသ အဖွဲ့ ချုပ် should moved to Saudi.
မိုးသီးရေ မင်းဟာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို
ဒုက္ခသယ်တွေကို NLD ကော အစိုးရကော
ရပ်ရွာလူထုကော တစ်ခြားလူမှုရေး အသင်း
အဖွဲကော အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီ နိုင်သလောက်
ကူနေတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအသိကို မင်းမို့ သောက်ရှက်မရှိ မုန်လာဥလုပ် ဖင်ပိတ်ငြင်း
နို့မေးပါရစေ မင်းကခုလို ကန့်ကွက်ကြောင်း
ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်တော့ ဟိုကဒုက္ခသယ်တွေ ထမင်းဝသွားရောလား/ ရေကောင်းရသွားရောလား/ အိမ်သာ အဆင်
ပြေသွားရောလား/ ပြောစမ်းပါ မင်းရဲ့ သောက်သုံး လုံးလုံးမကျတဲ့ ကြေညာချက်
ကြောင့် အဆင်ပြေ သွားတာလေး တစ်ခုခု။
ကြည့်လုပ်ဟေ့ တော်ကြာ မင်းကြေညာချက်
နဲ့ မင်းမျက်နှာပြန် ဖြတ်ရိုက်ခံနေရဦးမဟ။
တတ်လဲတတ်နိုင်တဲ့ ကောင်ကွာ ကျလောက်
ပါပေရဲ့။ ကြေညာချက်တဲ့ ထွီ!
ဒီမှာ ငမိုးသီးရဲ့ တစ်ဆက်ထဲ ပြောလိုက်ပါရစေ
နေရာဆိုတာ ပေးသူရှိမှ ထိုက်လဲ ထိုက်တန်ဦး
မှ ရသကွ။ ခုမင်း ဟိုဒင်းနေရာ မရဖြစ်နေတာ
ပေးသူ မရှိလို့ မထိုက်တန်လို့ ဆိုတာ ရှင်းနေ
တာပဲ။ ဒါကို မင်းသားမှ မလုပ်ရ ပတ်မကြီး ဖောက်သကွလို့ လုပ်တော့ မင်းပဲ ဖွတ်ထက်ညစ် နစ်သထက်နစ် တော့မပေါ့။